Soomaalida ku nool Switzerland oo si weyn u ciiday [Sawiro-Video] - Caasimada Online
Home Warar Soomaalida ku nool Switzerland oo si weyn u ciiday
Soomaalida ku nool Switzerland oo si weyn u ciiday [Sawiro-Video]
Maanta oo ah Maalinta 1aad ee Munaasabada Ciidul Udxiyada ama Ciid weynaada ayaa Musliimiinta ku Nool Dalkan Switzeland waxa ay maanta u wada Ciideen si isku Mid ah.
Boqolaal Muslimiinta oo ay Soomaalida Ku Nool dalkan Switzerland qeyb ka tahay ayaa maanta waxa ay si weyn ugu dabaal degay Munaasabada Ciida Carafo.
Musliimiinta Switzerland ayaa salaadii Ciida waxa ay ku Ogeen Goobo kala gedisan inkastoo Magaalooyinka waa weyn sida Zurich, Basel, Bern iyo Geneva ay ahaayeen Meelaha shalay sida weyn Loogu dabaal degay Musaanada Ciida Udxiyada.
Magaalada Zurich oo ah Magaalada ganacsiga dalka Switerland oo aan saaka kaga qeyb galay salaadii Ciida, ayaa waxaa goobta lagu tukanayay salaada Ciida sidoo kale waxaa goo ku sugnaa Soomaalid aad u fara Badan oo wajiyadooda laga dheehan karay farax iyo Reyn Reyn.
Qaar ka tirsan Soomaalidii Saakay ku Ciiday Magaalada Zurich ayaa iyagoo aad u Faraxsan waxa ay ka hadleen sida uu dareenlooda yahay iyagoo sidoo kale ka faa’iideestay fursad uu siiyay Radiyaha Kumiyaha si ay Ehaldooda hawada ugu salaamaan.
Munaasabada Ciida Udxiyada ama Ciida Carafo ayaa waxaa ay ka mid tahay Maalmaha Farxada oo ay leeyihiin Dadka Muslimiinta .